ဝက်သားပွင့်အပင်ပွင့်သစ်သီး (ဒါကြောင့်အရည်ရွှမ်း။ နူးညံ့သော) - ချက်ပြုတ်နည်းများ
Ritz crackers နှင့်အတူအိမ်လုပ်ပါးလွှာသော mints
ပဲငံပြာရည်နှင့် teriyaki အကြားခြားနားချက်
အဘယ်သူမျှမမုန့်ဖုတ် key ကိုထုံးပိုင်အေးခဲ
Herb Crusted ဝက်သား Tenderloin
ဤသည်လွယ်ကူသော Herb Crusted ဝက်သား Tenderloin ဖန်စီအရသာပေမယ့်တကယ်ကပါပဲ စူပါလွယ်ကူမြန်ဆန် !
၀ က်သားတင်ဒါးကို dijon ဖြင့်ဆေးကြောပြီးနောက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အချိန်ကာလများတွင်လှိမ့်ဝင်ပြီးမီးဖို၌ဖုတ်ရသည်။ ဒါဟာတစ်ခုတည်းအချိန်အရည်ရွှမ်းပဲ!
ဒီ ၀ က်သားတင်လွိုက်စာရွက်ဟာမလွယ်ကူလှပါဘူး အရသာစားသောက်ဆိုင် - အရည်အသွေးကိုဖြစ်ပါတယ် !
သော့ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစာရွက်နှုန်းမြင့်အပူချိန် (နှင့်ချက်ပြုတ်အချိန်) ၌တည်ရှိ၏။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ (ခြောက်သွေ့သောသို့မဟုတ်လတ်ဆတ်သော) မှမည်သည့်အရာမှမဆိုအရသာရှိသောအရသာကိုပေးသည် Hasselback အာလူး ရန် လှော်ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းနှင့်ပန်းဂေါ်ဖီ ။
ဝက်သားချောင် vs ရက်ရာဇာ
ဝက်သား tenderloin ဝက်သားခါးထက် ပို၍ နူးညံ့သောအသားသေးသွယ်သောအသားတစ်ဖြတ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အချင်း ၁/၂ မှ ၂″ နှင့် ၁၀″ အရှည်ခန့်ရှိသည်။
ဝက်သားခါးပတ်သည် ၅ လက်မခန့်ရှိပြီးတင်ဒါထက်အနည်းငယ်ပိုမိုပြင်းထန်လေ့ရှိသည်။ ပုံသဏ္/ာန် / အရွယ်အစားကြောင့်ချက်ပြုတ်ချိန်သည်ကွဲပြားသည်။ ငါတို့ ဝက်သားခါးကိုကင် ဤတင်ဒါသည်မိနစ် ၂၀ သာလိုသည်။ တစ်နာရီခန့်။
ဝက်သား Tenderloin ချက်ပြုတ်နည်း
Herb Crusted ဝက်သားတင်ဒါသည်လုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးနူးညံ့။ အရည်ရွှမ်းသည့်အခါတိုင်းထွက်ပေါ်လာသည်။
၀ က်သားတင်စင်ကို dijon အရောအနှောနှင့်ဖြန်းပြီးနောက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ဖြန်းပါ။
အဆီအနှစ်များကိုနူးညံ့ချောမွေ့အောင်လုပ်ပါ က အောက်ကစာရွက် ။
မိနစ် ၂၀ ခန့်အတွက်ကင်ပါ။
ဖြတ်ခြင်းမပြုမီ ၅-၁၀ မိနစ်အနားယူပါ။
pro အမျိုးအစား: ဝက်သားတင်ဒါသည်အလွန်အကံျွသောက်လျှင်ခြောက်သွေ့သွားမည်ဖြစ်သဖြင့်အသားသာမိုမီတာကိုအသုံးပြုရန်အရေးကြီးသည်။
TO သို့ ပြီးပြည့်စုံသောဝက်သားတင်ဒါ ၁၄၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်သာချက်သင့်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ဝက်သားသည်အလယ်၌ပန်းရောင်ထိရုံသာရှိလိမ့်မည်။ ၀ က်သားတင်ဒါသည်အရည်ရွှမ်းပြီးအသားတင်တင်ဒါသေချာစေရန်အလို့ငှာအလယ်၌ပန်းရောင်နည်းနည်းဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။ ဝက်သားကိုချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုရှာဖွေပါ pork.org ။
ဝက်သားတင်ဒါ (ဝက်သားခါးမဟုတ်) ကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။
ဝက်သားကပိန်သည်။ အလွယ်တကူစားနိုင်သည်။ ဝက်သား ၁၄၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိရောက်အောင်အသားအပူတိုင်းကိရိယာကိုသုံးပါ။ ငါက 140-142 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အကြားမီးဖိုထဲကဝက်သားကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်။ ဆက်ပြီးတော့ဆက်နေလိမ့်မယ်။
၀ က်သားကိုအနည်းဆုံး ၅-၁၀ မိနစ်မ ၀ င်ခင်အနားယူပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Fave ဘေးထွက်ဟင်း
Zucchini မှော် - အလွန်ရောင်စုံ & cheesy
လှော် Brussel ပင်ပေါက် - ရိုးရှင်းသောပါဝင်ပစ္စည်းများ - ၅
Crispy ကြက်သွန်ဖြူပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း - ၁၅ မိနစ်အတွင်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ
မုန်လာဥနီမုန်လာဥနီ - ချိုမြိန်ခြင်း၊
Butternut Squash Risotto လွယ်ကူသော်လည်းကြော့ရှင်းပါသည်
သင်သည်ဤ Herb Crusted ဝက်သားတင်ဒါကိုနှစ်သက်ပါသလား။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမှတ်ချက်နှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထားခဲ့ပါ။
ပြင်ဆင်ချိန်၁၀ မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်၂ မိနစ်များ အနားယူချိန်၅ မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်၃၈ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၆ စာရေးသူHolly Nilsson ၀ က်သားအသားညှပ်ပေါင်မုန့်သည်မြက်ပင်များတွင်ပွတ်ပြီးအရည်ရွှမ်းပြီးနူးညံ့သည့်အထိဖုတ်သည်။ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢၁ ပေါင် ဝက်သား tenderloin
▢၁ ဇွန်း Dijon မုန်ညင်း
▢နှစ် ဇွန်း သံလွင်ဆီ ခွာ
▢၁ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ငါမိုးမခပါပဲ
▢နှစ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း လတ်ဆတ်သော Rosemary ထုကုန်တယ်
▢နှစ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း လတ်ဆတ်သော parsley ထုကုန်တယ်
▢၁ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း လတ်ဆတ်သောစမုန်ဖြူအရွက်
▢½ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ကိုရှာဆား
▢¼ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ငရုတ်ကောင်းအနက်ရောင်
မီးဖိုကို 400 ° F အထိအပူပေးပြီးသတ္တုပါးနှင့်မုန့်ဖုတ်ပါ။
Dijon မုန်ညင်း၊ ဇွန်း ၁ သံလွင်ဆီနှင့်ပဲပိစပ်လေးကိုပဲပိစပ်လေးထဲကိုထည့်ပါ။ ဝက်သားကိုဖြုတ်ပါ
လတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ဆားနှင့်ငရုတ်ကောင်းတို့ကိုအင်တုံငယ်လေးထဲ၌ပေါင်းထည့်ပါ။ ဝက်သားအပေါ်ဖြန်းပါ (သို့မဟုတ်အရောအနှောအတွက်ဝက်သားလှိမ့်) ။
အလယ်အလတ်အပူနှင့်အညိုရောင်ဝက်သားကိုတစ်ဖက်တွင် ၂ မိနစ်ခန့်ကြာအောင်လိမ္မော်တစ်ဇွန်းတစ်ဇွန်းတွင်အပူပေးပါ။
ဝက်သားကိုပေါင်မုန့်ဖုတ်စာရွက်ပေါ်တွင်ထားပါ။ ၁၈-၂၀ မိနစ်ခန့်သို့မဟုတ်အပူချိန်တိုင်းတာသည့်အတွင်းအပူချိန် ၁၄၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိမဖော်ပြမှီတိုင်အောင်၊
ဖြတ်ခြင်းမပြုမီအနည်းဆုံး ၅ မိနစ်အနားယူရန်ခွင့်ပြုပါ။
သင်ဝက်သားတင်ဒါကိုသုံးနေတယ်ဆိုတာသေချာပါစေ (၀ က်သားခါးမဟုတ်ပါ) ။
သော့ချက်စာလုံးဟင်းသီးဟင်းရွက် Crusted ဝက်သား Tenderloin, Herb Crusted ဝက်သား Tenderloin စာရွက်, Herb Crusted ဝက်သား Tenderloin, ဝက်သား tenderloin သင်တန်းညစာ၊ Entree၊ အဓိကသင်တန်း၊ ဝက်သား ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုချက်ချင်းကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝတားမြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။